Nsuku zonke ukuze Domodedovo sezindiza ukusheshe izinkulungwane zabantu: othile ezisheshayo ukubhalisa, umuntu escorts abangane nezihlobo, futhi umuntu uya abhekane zafinyelela. Futhi bebhekene nenkinga efanayo - indlela leya Domodedovo ngokushesha futhi ngokunethezeka nge? Isikhumulo sezindiza ukufinyeleleka isici oluthinta ngqo ngeke kanjani ukhululekile abagibeli ukufika futhi lwephuze ukubhaliswa. Kule ngombono, esikhumulweni sezindiza - lokuma real bathole izinsiza zempilo.
Efuna ukwazi ukuthi ungafika kanjani Domodedovo sezindiza, okokuqala banake yokuthi phakathi edolobheni laseMoscow kuye ingqikithi 40 km, futhi kusukela eMoscow ngisho kancane - 20. Ingqalasizinda yomgwaqo ahlobanisa Domodedovo eMoscow, athuthukiswe kahle. Emgwaqweni emgwaqweni omkhulu wamyisa sezindiza uzizwa ongabonakali, njengoba ukhululekile futhi imfushane kakhulu. Nginqobe lezi 20-40 km (kuye ngokuthi ingxenye wena eMoscow) kungaba ngezindlela eziningana, okubandakanya ngempumelelo yathuthukisa uxhaxha ezokuthutha.
Abafisa ukunquma indlela leya Domodedovo cishe, kufanele ucabangele izindlela eziningana. Ngokungangabazeki, itekisi ukuze Domodedovo sezindiza - kuyindlela ukhululekile kakhulu futhi esheshayo, okuyinto lihlotshaniswa ubuncane ingozi. Iyala itekisi isikhathi esithize, ungathola ndawonye, uthole emotweni futhi ngokushesha wayeseshumayeza ukungena endaweni sezindiza. Efuna ukuthola indlela uthole Domodedovo, ukulondoloza ngangokunokwenzeka, kufanele akhethe amabhasi kanye namatekisi, kodwa ungakhohlwa mayelana lokuthi isikhathi esichithwa endleleni, lapha wena ngokuphelele ngaphansi kwe-nokududuza, nokuqunga isibindi kuyoba ingasaphathwa. Enye indlela - Aeroexpress, okuyinto isuka Paveletsky uphethiloli njalo ngemizuzu amathathu.
Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi indlela ukuba banqobe indlela eya Domodedovo obakhethayo, zama acabangele sezulu kanye isici womuntu, ngakho ngaso sonke isikhathi ukushiya kwesokunxele ihora elilodwa okuyokwenza nganoma iyiphi indlela ukuba endaweni efanele ngesikhathi esifanele!
Uma esikhumulweni sezindiza, ngeke ngalutho nge inkinga eyodwa unsolvable, ngisho efika ngaphambi kwesikhathi esifanele, ngeke uthole nesithukuthezi. Awukho umsebenzi ngeke wenze ephendula umbuzo mayelana nendlela ufika Domodedovo futhi mayelana kuphi imoto on insimu yalo. Fika ku imoto yakho, ungakwazi ukulishiya yokupaka, okuyinto lunamandla izimoto mayelana 5000 futhi ingaphansi njalo video ukubhekwa kanye nokuvikeleka.
ukuphathwa kwenkampani uye wenza konke angakwenza ukuze adale abagibeli esikhumulweni sezindiza ayengakwenza ngokushesha ngangokunokwenzeka, ukuze inqubo yokubhalisa Kwenziwa kanyekanye endaweni yomkhuleko eziyisithupha. Ungathenga amathikithi ngisho ngokushesha ngoba Amahhovisi amaningi abasebenza ubusuku nemini, ukunikela amakhasimende isevisi elula kakhudlwana. Abagibeli ngubani qala endleleni ngaphandle umthwalo, kodwa kuphela esandleni imithwalo, sakhonza ibha eseceleni, esibenza bakwazi ngokushesha ukubhalisa.
I ukugcina abagibeli esikhumulweni sezindiza iye yaklonyeliswa-ISO 9001: 2000 ngowokuqala eRussia, okuyinto waphinda kufakazela ingqalasizinda ekahle esigungwini. Nezokungcebeleka nokulinda esikhumulweni sezindiza lizojabulisa. Lapha wonke umuntu angakwazi ukusizakala kunethiwekhi ye-Wi-Fi ihlanganisa yonke indawo sezindiza, vakashela i-DVD cinema, embukisweni imidwebo ethandwayo abaculi Russian bazithola esiyingqayizivele Art-Igalari, adle e izindawo zokudlela, amathilomu kanye lula. Ngenxa ngemisebenzi emihle ka Domodedovo Airport uyokukhumbula njengendawo olukhulu ezokufika, nokuzijabulisa.
Ezibiyele of Rostov Elikhulu: incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso
"Pokrovsky okugeza": Izibuyekezo
Nini futhi kanjani ukugubha uSuku libhayisikili?